"Kutamba" nevakuru mabasa. Iwe unovandudza zvakanyanya nekunakidzwa? | Kudzidziswa Kwekuziva
Kwemakore makore research yanga ichiitwa kuti unzwisise kuti mabasa esimba anodzidziswa uye ari mumamiriro api ezvinhu. Takataura nezvazvo kazhinji, zvese zvine hukama nezera rechikoro (semuenzaniso qui), zvese zvine chekuita nezera rechikoro (semuenzaniso qui).
Isu takaona kuti panogona kuve nekukosha kwakabuditsika zvakanaka mune mbiri yemasvomhu (kindergarten e muchikoro chekutanga uye chepakatiiri mu nzwisiso yezvinyorwa.
Pasina mubvunzo, izvo zvakatarisana kushanda ndangariro iko kurapwa kwemabasa ekutonga ane mhedzisiro yakanyanya kuongororwa. Uye hazvireve kuti takangoerekana taitika manyorerwo pamhepo kudzidzisa kushanda memory, mune dzakawanda zviitiko zvichienderana nazvo umboo kubva mumabhuku esainzi.
Nhasi tinowedzera chimwe chidimbu paruzivo pane icho chinyorwa.
Mune chinyorwa chesayenzi chakabudiswa muna 2019 anonakidza hypothesis yakaedzwa: Ko kuita mutambo-senge kurapwa kunoita kuti kuve kwakanyanya kushanda?
Kupindura uyu mubvunzo, Johann naKarbach vakaisa chiverengero chikuru chevana pabvunzo dzakasiyana kuti vaongorore mabasa ehutariri uye kudzidza kwechikoro (kuverenga nemasvomhu); mushure mezvo ivo vakakamurwa mumapoka manomwe:
Mapoka matatu akadzidziswa pane chimwe chikamu chemabasa makuru (inhibition kana kushanda ndangariro kana kuziva hunhu);
Mapoka matatu akaiswa pakurovedzwa kwakafanana asi nechimiro chinotamba, chakafanana nemutambo wevhidhiyo;
rimwe boka harina kuita chero kudzidziswa.
Pakupera kwekudzidziswa (i.e. mushure memasangano makumi maviri nemasere ekurapa) ivo vese vakaongororwazve kuti vatarise chero kuvandudzika uye mutsauko pakati pemapoka.
tend rimwe nerimwe boka rakagadziridzwa muchikamu chakadzidziswa chemabasa makuru (tichienzanisa zvavakaita neboka rekutonga, kureva iro risina kuita chero kudzidziswa), pasina mutsauko pakati pevana vari kudzidziswa zvedzidzo uye vana vaishandisa zvirongwa zvine playise guise.
Misiyano yacho yakavapo pane zvimwe zvinhu:
Vana vaishandisa playful shanduro yeirovedzo yakataura kuti vakakurudzirwa kuramba vachidzidziswa.
Nguva dzose vana vaishandisa playful shanduro yekudzidziswa yakaratidza kuvandudzika kwakanyanya mukudzidziswa kwechikoro nezvekuverenga; kunyanya, avo vakapinda mukuvandudzwa kwekuziva kusanzwisisika kana inhibition vakawanawo kuvandudzwa kwekunzwisisa rugwaro uku kuvandudzwa kwekukurumidza kuverenga kwakacherechedzwa mune avo vakadzidzisa chinamato.
Sezvakakurukurwa muzvinyorwa zvakapfuura, manejimendi basa rekudzidzisa rinoita kunge rinobatsira mukuvandudza kudzidza kwechikoro futi (pamwe nekuvandudza basa rakadzidziswa zvakananga). Kunyanya, kana isu takamboona zvakanaka mhedzisiro yekusimudzira yekushanda ndangariro, mune ino kesi tinoona chinogoneka chinoshandiswa zvakare mukudzidziswa kwekudzivirira uye kwekuziva kushanduka.
Uyezve, nekupihwa kukurudzira kwakanyanya kunoziviswa nevana uye kuwanda kwezvikonzero zvakakosha kuti tishandise nguva uye simba mukuyedza kuti kurapwa kuite (inonakidza!), zvose kuwedzera kubatana kwevarwere vadiki uye kuwedzera mukana wekuona kuvandudzwa.
Sezvazvinoitika kazhinji, zvakadaro, mune ino zvakare nyaya tinoda kukoka yambiro mukududzira zvawanikwa; mune iyi kesi, muchokwadi, ivo vaongorori vakasiya kusahadzika kuzhinji nekuda kwekugadzikwa kwekutsvaga kwavo: kutanga kwezvose, iro boka rekutonga raive "rakaperera" saka hazvigoneke kuratidza kuti mhedzisiro yemhedzisiro ndeyei; kumwe kusahadzika kune chekuita nenyaya yekuti vaongorori vakatadza kuyedza chero "yekuendesa" mhedzisiro (semuenzaniso, ndiani akadzidzisa chinhibvumidzo zvakare akavandudza kushanda mundangariro?); Chekupedzisira, hazvisi kujeka kuti nei, kunyangwe kudzidzisa zvakafanana ruzivo rwekuziva (inhibition kana kushanda ndangariro kana kungwara kusanzwisisika) uye kuwana iwo mhedzisiro yakafanana pamiedzo yebasa revatungamiriri, iro chete "mutambo" boka rakawana kuvandudzwa pane hunyanzvi husina kudzidziswa zvakananga. (kumhanya kwekuverenga nekunzwisisa kwemavara).
Kunyangwe pane zvausingakwanisi kutaurwa, tsvagurudzo iyi inotipindirana neakakosha basa redu rezvekiriniki: kana tichishanda nevana, ingani nguva yedu yatinoshandisa kukurudzira kwavo? Mune maawa asingaperi apedza kuronga uye kugadzira yakasarudzika kudzidziswa nezvehunhu hwemwana, inguva yakawanda sei yatinosiya yekuitisa zviitiko? Isu tinopa kukosha kwakakwana kumutambo?
Isu tine chokwadi chekuti nyanzvi dzakawanda dzaisada kutsanangurwa kwakati kuti tifunge kuti kukurudzira kwavana kuri sei pabasa redu. Kuve nezvisimbiso uye chikafu chekufunga kubva pakutsvaga, mune chero mamiriro ezvinhu, anogara achibatsira mune redu basa.
In yedu GameCenter Executive Mabasa iwe unowana yakawanda inoshanda uye yemahara web-Apps pane makuru mabasa
Iko kusanganiswa kwakasangana kwekushanda kwekuyeuka uye hunyanzvi hwemasvomhu
Johann, VE, & Karbach, J. (2019). Mhedzisiro yemitambo-yakavakirwa uye yakajairwa Executive control kudzidziswa pane kugona kuziva uye kugona kugona mune epuraimari vana vechikoro. Sayenzi Yekubudirira, e12866.
Karbach, J., Könen, T., & Spengler, M. (2017). Ndiani anonyanya kubatsira? Misiyano yemunhu mumwechete mukutamisirwa kwekutonga kwevakuru kudzidziswa muhupenyu hwese. Chinyorwa cheKubata kweKunzwisisa, 1(4), 394-405.
Kubvuma sanduko, mabasa makuru, mabasa makuru nekutamba, chinovhiringidza, kushanda ndangariro, Executive mabasa kurapwa
"Kutamba" nemabasa makuru. Inochinja here nekunakidzwa?2020-08-022020-08-03http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/giocare-con-le-funzioni-esecutive.jpg200px200px